Ideski Lemidlalo Ethengisa Isitolo Esitolo Ene-RGB Model LY Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-TwoBlow
Izinto eziyinhloko:Ibhodi Lezinhlayiya, Insimbi, Ipulasitiki
Okubalulekile okuphezulu:Ibhodi Lengxenye
• Indawo yokudlala enkulu: Ithebula legeyimu le-Twoblow linendawo enkulu engu-120*60*75cm futhi linikeza isikhala esiningi sekhompyutha, imonitha, ikhibhodi, igundane, izipikha njll. futhi linikeza abadlali ukuguquguquka okufanelekile ukuze bafeze amaphupho abo egeyimu.
• Imisebenzi yokudlala eyakhelwe ngaphakathi: Ideskithophu yekhompyutha ye-Twoblow yakhelwe ukuthuthukisa ukuzizwisa kwakho kwegeyimu.Iza nesibambi senkomishi esikahle, ihuku lama-headphone, ubhasikidi wokugcina izimbobo zokuphatha amakhebula angu-2 ukuze ugcine ithebula lakho legeyimu licocekile.
• Idizayini eqinile futhi ezinzile emise okuka-T: Yenziwe nge-high-density fibreboard enendawo ye-PVC kanye nohlaka lwensimbi olumbozwe olunokuqina okuphezulu.Idizayini emise okwe-T kanye nezinyawo ezine zokulinganisa ziqinisekisa ukuthi ideski lihlala livundlile.
• Idizayini yezinhloso eziningi: Imisebenzi emnyama yangaphandle nesebenzayo ilungele imidlalo nehhovisi!Ingasetshenziswa futhi njengetafula le-PC, itafula lehhovisi, itafula lokufunda, isiteshi sehhovisi, ithebula lekhompyutha, njll. Amaphedi onyawo alungisekayo angavikela kakhulu ideski ngokwalo futhi avimbele ukulimala kwaphansi lapho uhambisa ideski.
• Ukwaneliseka kwekhasimende: Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi sithuthukisa futhi sakha amadeski amageyimu angcono kakhulu emakethe.
Ithebula Lemidlalo Elimise Okungu-T I-Twoblow
Ukwakhiwa okuqinile nokuzinzile
Ideski lemidlalo ye-Twoblow elakhiwe ngomumo we-T kanye nezinyawo ezine zokulinganisa, okugcina ideski livundlile endaweni engalingani ngaphandle kokuntengantenga.Uhlaka lwensimbi oluqinile nomlenze wensimbi oyi-hexagonal kuqinisekisa ukuqina nokuqina okuphezulu.
Idizayini yesimanje kanye nokusebenza okuningi
Idizayinelwe ngesitayela sesimanje, eyakhelwe ngokukhethekile abadlali bamageyimu, ingasetshenziswa futhi njengedeski lekhompyutha, indawo yokusebenzela yasehhovisi, isitebele sokufunda, ideski lekhaya lakho nehhovisi futhi ihlinzeka ngokudlala okuhle kanye nesipiliyoni sokusebenza.
I-Premium carbon fibre desktop
Ideskithophu yenziwe nge-PVC carbon fibre surface kanye ne-P2 laminate chipboard, engangeni manzi futhi ayigugi, okwenza ihlale isikhathi eside kunamaphaneli avamile.
Uhlaka lwensimbi oluqinile olumise okuka-T
Idizayinelwe ngohlaka lwensimbi oluqinile olufakwe ngempushana kanye nomlenze wensimbi one-hexagonal ongaqinisekisa ukuqina nokuqina okuphezulu, futhi umthwalo omkhulu ungafika kumakhilogremu angu-440.
Idizayini enezinjongo eziningi
Usayizi ophelele unikeza isikhala esiningi sokudlala, ukubhala, ukufunda neminye imisebenzi yasehhovisi lasekhaya.
Isibambi sesiphuzo: Ungakwazi ukusilungisela kwesokunxele noma kwesokudla njengoba kudingeka.
i-headphone hook: ihuku le-headphone ohlangothini ngalunye ukuze uthole ulwazi olungcono lokudlala.
Igobolondo lokuphatha ikhebula: Ungafihla zonke izintambo ngobunono futhi ugcine ideskithophu ihlanzekile.
Amaphedi onyawo alungisekayo: Amaphedi ezinyawo alungisekayo avikela iphansi lakho ekuklwebheni futhi agcine ideski lekhompyutha lizinzile endaweni engalingani ngaphandle kokuntengantenga.
Esikuphishekelayo kwaphakade isimo sengqondo "sokubheka imakethe, ukubheka isiko, ukubheka isayensi" kanye nethiyori "yekhwalithi eyisisekelo, kholelwa kwasekuqaleni kanye nokuphatha okuthuthukisiwe" kwe-OEM/ODM China China Egonomic R Structure Gaming Desk PC Desk With Metal Frame, Besizimisele ukukunikeza amasu afanele ngaphakathi kwemiklamo yama-oda ngendlela ekhethekile uma uwadinga.Okwamanje, sisaqhubeka nokuthola ubuchwepheshe obusha kanye nokukhiqiza imiklamo emisha ukuze sikukhiqizele phambili kusukela kulayini waleli bhizinisi elincane.
Okwedlule: I-Wholesale yase-China Extreme Gaming Chair Factories Pricelist - Isihlalo sehhovisi Model P005 - TWOBLOW
Olandelayo: Ithebula lokudlala eline-Z Shape Legs Model FM-Z